Su'aalaha-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
Rinjiga Su'aalaha Badbaadinta Rinjiga ah
Gaarigeyga miyaan wax usameyn karaa kahor rakibida Filimka Rinjiga KPAL Rinjiga?
Waxaa lagugula talinayaa inaadan marin wax ama wax lakab ah gaariga kahor intaadan rakibin filimka ilaalinta rinjiga. Wax ama wax kasta oo la daboolayo waxay faragelinayaan isku dhejinta filimka gaariga.
Sidee si saxan loogu duuduubaa geeska iyo geeska?
Qaybta duuduubka duubku waxay u baahan tahay in lagu nadiifiyo biyo nadiif ah, ka dibna lagu qalajiyo qori dubista ama hawo dabiici ah, si ay u noqoto mid siman oo si habsami leh u habboon. Gel rakibida KPAL ayaa lagula taliyay nadiifinta fudud.
Sidee loo ilaaliyaa alaabada hadhay isticmaalka kadib?
Ka dib markaad jarjartid filimka, inta hartay waa in loo rogaa kaydinta. PPF oo leh filim la sii daayo waa in si adag loo duubaa, PPF iyadoon filim la sii deynin waa in la rogrogaa dabacsan. Haddii filimka sii daaya ee hufan la jeexjeexo, dusha filimku wuxuu noqon doonaa mid aan sinnayn, godad yaryar iyo wixii la mid ah.
Su'aalaha Filimka Daaqadda
Qaab noocee ah ayaan u isticmaalnaa filimkan?
Filimkan waa in lagu rakibaa deegaanka qoyan. Waxaan u baahanahay inaan si fiican u nadiifino oogada dusha sare waa saliid, dufan, wax ama wasakhda kale ka hor inta aan la rakibin.
Filimku miyuu saameynayaa astaamaha gaariga?
Maya ka dib cusbooneysiinta tiknoolajiyada soo saarista filimka daaqada, filimka daaqada hadda jira wax saameyn ah kuma laha calaamadda gaariga.
Mudo intee le'eg ayuu filimka daaqaddu socon doonaa?
Inta badan filimka daaqada gaariga wuxuu ku yeelan karaa 3-5 sano banaanka, waxay kuxirantahay tayada. Filimka qurxinta dhismaha ee caadiga ah, wuxuu socon karaa illaa 4-5 sano. Iyo dhismaha filimka amniga, wuu sii dheeraan karaa.
Duub Vinyl Film Su'aalaha
Maxay yihiin faa'iidooyinka duubista gawaarida?
Baabuurka vinyl-ka ee lagu duubo gawaarida si fudud ayaa looga saari karaa si marka aad rabto inaad u iibiso gaarigaaga aad si fudud ugu soo celiso midabkiisii ​​asalka ahaa adigoon qiimo jabin. Sababta ugu weyn ee dadku u xirtaan gawaaridooda ayaa ah inay jeclaan lahaayeen inay ilaashadaan gaarigooda laakiin ay rabaan midab ka duwan.
Gawaarida duubku ma dhaawici doonaan gaariga?
Codsashada filimka duubista gawaarida takhasuska leh gaarigaaga ma dhaawici doonto rinjigaaga. Si kastaba ha noqotee Haddii aad horey u haysatay dhagxaanta dhagaxa, xoqidda ama nabarrada miridhku ku yaal ranjiyeyntaada waxaa muhiim ah in la xusuusto in marka vinylka laga saaro ay soo jiidan karto rinjiga dabacsan.
Sideen u daryeelaa xirmada vinylka?
Daryeelka duubka ee saxda ah wuxuu ka bilaabmaa aasaasiga. Ka ilaalinta dusha gaarigaaga nadaafaddiisa ayaa ah waxa ugu weyn ee walwalka laga qabo, sidaa darteed gacmo dhaqashada badan ee la tirtiro si looga takhaluso wasakhda dusha sare waa lagama maarmaan haddii aad rabto inaad ka ilaaliso duubkaaga inuu ku wasakheeyo ama ku waxyeeloobo wasakhda waddada.